Opera 52 iri pano, inokurumidza, yakanyanya kunaka uye ine zvakawanda zvinogadziridzwa | Linux Vakapindwa muropa
Opera ibhurawuza rewebhu, inova software yekudyidzana, asi yakavhurwa sosi, yakagadzirwa nekambani yeNorway Opera Software muna 1995, Opera yakaiswa pakati peimwe yeanonyanya kushandiswa pamabhurawuza. Parizvino Opera ine ine shanduro dzemahwendefa edesktop nenhare mbozha.
Zvakanaka, Iyo Opera timu yekusimudzira iri kufara kuzivisa uye ita kuti iwanikwe kune rese idzva rakatsiga vhezheni yeBrowser yako, nokudaro ichisvika vhezheni yayo Opera 52, iyo mune ino yazvino kugadzirisa nyowani yekuvandudza uye akawanda magadziridzo akawedzerwa kune iyo browser.
1 Bhurawuza rakachengeteka neOpera 52
1.1 Mifananidzo mitsva
1.2 Opera 52 nekukurumidza kupfuura nakare kose
1.3 Wana zvirinani neakawanda-tabu ruzivo
2 Maitiro ekuisa Opera 52 paLinux?
Bhurawuza rakachengeteka neOpera 52
En Iyi vhezheni nyowani yeOpera 52 yakavandudza iyo block block iyo yatinogona kuve nayo webhu kubhurawuza chikamu zvakanyanya, tichikanganwa nezve izvo zvinogumbura kushambadza uye kushambadzira windows.
Ndinofanira zvakare kutaura izvozvoe Opera ndiyo yekutanga browser mukutsvaga kupinda mune chimwe chinhu chinodzivirira zvinyorwa zvemigodhi, zvakawedzera kuchengetedzeka pamasheya e crypto iine cryptocurrency yekuchera migodhi ficha yeNoCoin.
Izvo zvatine kufamba kwakachengeteka uye pamusoro pezvose tinodzivirira zvishandiso zvedu kubva kune iwo mapeji ewebhu anoedza kutora zviwanikwa zvemidziyo yedu pasina mvumo yedu.
Naizvozvi, iyo yekushambadzira blocker inosanganisirwa ichiita kuti mushandisi kubhurawuza kunakidze.
Sezvo blocker ikozvino ichikurumidza kupfuura mushanduro dzakapfuura yakadarikawo izvo zvakaverengerwa mumamwe mabhurawuza nazvo, timu yekuvandudza yeOpera yakachengetedza kuzvipira kwekuvandudza kufamba.
Kutenda kune yakagadziridzwa tambo inoenderana nemaalgorithms, Opera's ad ichivharira mashandiro akaona yakakura kuita kwekuita kunobatsira kubatsira kutakura mapeji nekukurumidza.
Vakomana vanobva kuOpera wafunga kupa inobata kune iyo yekukanganisa zvikanganiso, kwavakawedzera mimwe mifananidzo kune zvimwe zvakajairika zvikanganiso:
Opera 52 nekukurumidza kupfuura nakare kose
Kune avo chikamu, ivo vaita bvunzo kuti vatiratidze kuti kuvandudza kwavo neiyi vhezheni yeOpera hakusi pasina, sezvo ivo vakaita tafura yekufananidza kwavanotiratidza mhedzisiro mushure memavhiki akati wandei ekushanda nesimba uye nesimba kuti vagare vakamuka kusvika nhasi:
Isu takakwenenzvera Opera 52 ine peji mutoro wekumhanya bvunzo kutarisana neOpera 51 uye Chrome 64 ine yavo ad blocker. Mabhurawuza akapihwa basa rekutakura gumi nemashanu anozivikanwa enhau mawebhusaiti kagumi pane imwe neimwe.
Wana zvirinani neakawanda-tabu ruzivo
Chekupedzisira, Opera yateererawo zvikumbiro zvevashandisi uye kushandiswa kwebrowser ine akawanda matabhu hakuchina kujairika, asi zvakapesana.
Ndokusaka muOpera 52 manejimendi etabhu akagadziridzwa kwadzinotitendera kuti tisarudze nekuita zviito mumatebhu akati wandei, kopi yemapeji akati wandei panguva imwe uye nzira pfupi yekhibhodi yekuvhara matabo.
Vashandisi unogona kusarudza akawanda matabhu nekubatisisa pasi iyo Ctrl kiyi uchibaya yega yega yaunoda tebhu (⌘ + tinya vashandisi veMacOS). Chii chimwe, Kubata Shift nekudzvanya pabhodhi kunosarudza mamwe ese tabo kurudyi. Isu tinofunga izvi kuvandudzwa kwekubata zvine mutsindo kunobatsira zvikuru.
Aya mhinduro nyowani anotendera vashandisi kurodha zvakare, kuvhara, pini, mbeveve kana kuchengetedza kukurumidza kumaka mamaki ako akasarudzwa panzvimbo pekuita zviito wega kana pane ese matabhu.
Maitiro ekuisa Opera 52 paLinux?
Kana iwe wakafarira izvo zvitsva zvinhu izvo bhurawuza iri rinotipa isu kana kana iwe uchingoda kuzviisa pane yako system.
Kuisa iyi yewebhu browser pane yedu system isu tinofanirwa kuenda kune yavo yepamutemo webhusaitil uye muchikamu chekurodha tichaenda kunotora iyo yekumisikidza yedu system, iyi link ichi ndicho.
Chete isu tinofanirwa kumhanyisa iyo inosimudza neyedu package package kufarira.
Kana iwe uchida kushandisa iyo terminal, tinoiisa ne:
Ipo, yeFedora, yakavhurikaSUSE uye chero kugoverwa kunobata RPM mapakeji:
sudo dnf opera*.rpm
Pasina imwezve ado, iwe unongofanirwa kunakirwa nekuvhura neOpera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Opera 52 iri pano, inokurumidza, yakanyanya kunaka uye ine zvakawanda zvinogadziridzwa
Ini ndinoshandisa opera mumahwindo uye mukubuntu ndinofanira kutaura kuti ini handina kuona off-road sarudzo zvakare kana network ichinonoka, zvikasadaro zvese zviri kufamba mushe
Iko kurangarira kwekushandisa kuri kuenda sei muOpera, ini ndine matanhatu chete muRam uye ndinoda kuziva kuti ndeupi mubrowser ari nani ne RAM yangu
Proprietary software, proprietary software, proprietary software.
Zvisina basa, kushandisa browser rinezvimwe nengozi.